[24 / 10 / 2019] 'Mgbakọ mgbakọ na mwepụ na kwụrụ ụgwọ' na Konya	42 Konya
[24 / 10 / 2019] Nkọwapụta Dị Mkpa maka Lineun Samsun Sarp	52 Army
[24 / 10 / 2019] Amzọ ụgbọ oloko Pamukkale Express na Ahịa tiketi	20 Denizli
[24 / 10 / 2019] Nkwụsị nke Nrọ enweghị ike iwere Haydarpaşa na Sirkeci site na ndị nke Istanbul	34 Istanbul
[24 / 10 / 2019] Anyị ka nwere ike na-abanye ụgbọ oloko ahụ site na Haydarpaşa	34 Istanbul
[24 / 10 / 2019] Tragbọ oloko na-aga njem na-amachi n'ike n'ime ndị ọrụ na Izmir	35 Izmir
[24 / 10 / 2019] Nnukwu onyinye site n'aka Onye isi ala Yavaş na Economy nke Studentsmụ akwụkwọ na Isi	06 Ankara
[24 / 10 / 2019] IETT na-ezute ndị njem ma na-eweta Ngwọta	34 Istanbul
[24 / 10 / 2019] Lakes Express Na-amalite njem Mgbe Afọ gachara	32 Nkeji
[23 / 10 / 2019] Pasent 22 nke ndị njem si n’ọdụ ụgbọ elu Istanbul kwaga	34 Istanbul
HomeTurkeyCentral Anatolia Region06 AnkaraỌsọ ọsọ ọsọ na-azụ oge
18 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 Ankara, 26 Eskisehir, 34 Istanbul, 42 Konya, Central Anatolia Region, ụgbọ okporo ígwè, General, Oru ngwa ngwa, Maps, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey 0
oge ụgbọ oloko ngwa ngwa
Ahịa tiketi tiketi nke 2019 dị ugbu a Yọọ Mbetị na Times: insgbọ oloko dị elu nke na-eme ka ndụ anyị dị mfe na njem ụgbọ elu na-aga n'ihu na-ejikọ obodo, ndị njem na ọdịbendị dị iche iche. A na-eji ụgbọ oloko na-agba ọsọ dị elu na-eje obodo dị iche iche nwere njiri njem dị iche iche na ụdị ụgbọ ala na nnukwu ofufe ma nwee atụmatụ teknụzụ dị elu. CDgbọ njem TCDD na-enye gị ohere njem a na-agaghị echefu echefu site na ijikọ ihe niile na mmepe nke teknụzụ na mpaghara a n'ụzọ kachasị ọsọ.
Ankara Istanbul Train Speed ​​Speed, Ankara Njem 6 Rụọ ọrụ. Traingbọ okporo igwe dị elu nke Ankara-Istanbul na-apụ site na Ankara na-akwụsị na Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit na Gebze kwụsịrị wee rute Pendik n'ihe dị ka nkeji 4 elekere 15. Karagbọ elu Ankara-Istanbul anaghị akwụsị na nkwụsị ụfọdụ oge mgbe ụgbọ oloko ahụ nwere ike ibute ndịiche.
Ankara Eskişehir High Speed ​​Train Eskişehir bụ otu nkwụsị na Line Ankara Line. Ọ ga-ekwe omume ịme njem 5 site n'usoro a. Na mgbakwunye, enwere eriri Ankara Eskişehir. Ankara Eskişehir High Train Line Train, nke bụ otu n’ime ụgbọ elu nke 6, na-eme ụgbọ elu 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a bụ obere oge, ụgbọ epeepe adịghị n'ime ya. Ebe ọ bụ na ụgbọ okporo ígwè dị n'obodo, njem n'etiti Ankara na Eskişehir na-ewe ihe dị ka awa 1,5. Kama ị ga-eji ụgbọ oloko a mee njem, ị nwekwara ike họrọ ahịrị Anlara-Istanbul. Abụọ na-agafe otu nkwụsị ahụ.
Eskişehir-Ankara Train Speed ​​Speed ​​Eskişehir bụ otu nkwụsị na Line İstanbul Ankara. Ọ ga-ekwe omume ịme njem 5 site n'usoro a. Na mgbakwunye, e nwekwara ahịrị Eskişehir Ankara. Erkisehir Ankara Line Train Train Speed ​​Speed, nke bụ otu n'ime njem ndị njem 6, na-eme njem 11 kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na oge a bụ obere oge, ụgbọ epeepe adịghị n'ime ya. Ebe ọ bụ na ụgbọ okporo ígwè dị n'obodo, oge a na-enye ndị njem ezigbo ọrụ. Njem a na-ewe nkezi nke awa 1,5.
The Ankara Konya High Speed ​​Train na-agba kwa ụbọchị. Ogologo oge nke njem ndị a bụ awa 7 na nkeji 1. Sincan na Polatli akwụsị. Enwere nhọrọ tiketi abụọ, ndị a bụ ọkọlọtọ ma na-agbanwe agbanwe. Traindị ụgbọ elu nke nwere ụdị ọsọ 55 n'ụdị ụgbọ elu gụnyere otu klas akụ na ụba xNUMX + 2 pulley na klas azụmahịa 2 + 2. Oge a dị mkpụmkpụ-oge, yabụ enweghị ụgbọ ala na nri.
Traya High Speed ​​Konya-Ankara na-agba kwa ụbọchị. Ogologo oge nke njem ndị a bụ awa 7 na nkeji 1. Polatlı na Sincan akwụsị. Enwere nhọrọ tiketi abụọ, ndị a bụ ọkọlọtọ ma na-agbanwe agbanwe. Traindị ụgbọ elu nke nwere ụdị ọsọ 55 n'ụdị ụgbọ elu gụnyere otu klas akụ na ụba xNUMX + 2 pulley na klas azụmahịa 2 + 2. Oge a dị mkpụmkpụ-oge, yabụ enweghị ụgbọ ala na nri.
Yagbọ okporo ígwè dị elu nke Konya-Istanbul na-eme ụgbọ elu 2 kwa ụbọchị. Oge ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ bụ Istanbul Pendik. Oge nkezi njem ha bụ awa 4 na nkeji 20. Nkwụsị ụgbọ okporo ígwè Konya-Istanbul dị iche iche bụ Eskisehir, Bozuyuk, Bilecik, Arifiye, Izmit na Gebze. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon. Traingbọ ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmaahịa pulman, ụgbọ ala azụmaahịa pulman na nri.
Kongbọ okporo ígwè dị elu na Istanbul Konya na-agba 2 kwa ụbọchị. Ebe ikpeazụ ụgbọ oloko ahụ dị bụ Konya. Traingbọ ahụ mezue oge njem na nkeji 4 hour 20. -Gbọ okporo Ugbo elu nke Istanbul-Konya gafere Gebze, Izmit, Arifiye, Bilecik, Bozuyuk, Eskisehir dị iche iche. Nwere ike ịzụta ụgbọ elu nwere nhọrọ ọkọlọtọ abụọ na mgbanwe mgbanwe yana 3 dị iche iche ụdị ụgbọ ala wagon. Traingbọ ahụ gụnyere akụ na ụba pulman, azụmaahịa pulman, ụgbọ ala azụmaahịa pulman na nri. Ọnụahịa tiketi ụgbọ oloko dịgasị iche iche n'ụdị ụgbọ ala.
Okwu Mmalite Maka Tragba Ọgba Dị Anya
Zụ njikọ site na Eskişehir na Afyon na Kütahya 02 / 09 / 2012 ESKISEHIR si elu-ọsọ-azụ AFYON ụgbọ okporo ígwè Njikọ 71622 Noli ụgbọ okporo ígwè Eskişehir K: 17.45 ọgwụ opium V: 20.59 71621 Noli Train ọgwụ opium K: 07.20 Eskisehir V: 10.50 ESKISEHIR si elu-ọsọ-azụ KUTAHYA ụgbọ okporo ígwè Njikọ Eskisehir K: 09.00 Kutahya V : 10.16 Eskisehir K: 13.00 Kütahya V: 14.15 Eskisehir K: 19.50 Tavsanlı V: 21.58 Tavsanlı K: 06.40 Eskisehir V: 08.48 Kutahya K: 11.10 Eskisehir V: 12.28 Kutahya K: 17.15 Eskisehir V: 18.32
Ọganihu dị elu site na Ankara ka Konya 04 / 12 / 2012 Site Ankara - Konya High Speed ​​Train YHT ese si Konya - Ankara, na Ankara - Konya YHT oge nhazi nke elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè mbata oge, ọpụpụ oge YHT-ọsọ ụgbọ okporo ígwè ọpụpụ oge irè site January 17.08.2012; Site Ankara - Konya - Konya si - ka Ankara arụ ọrụ elu-ọsọ ụgbọ okporo ígwè YHT ụgbọ oloko na Mbula - abịa oge chaatị (kwa ụbọchị na-eme na-Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday) Hz. Mevlana ncheta ememe ndị ruru Vuslat Seb 08, 09, 14, 15, 16 December 2012 08.16 site na ụbọchị nke Ankara, Konya Site 19.05, site kwa na Ankara on 17.12.2012 08.16, 23.30 si Konya to ...
Ọsọ ọsọ ọsọ na-azụ oge 25 / 12 / 2012 Oge ụgbọ oloko dị elu sitere n'aka 17.08.2012; AKWỤKWỌ NDỊ KWURU NA NTỤKWỌ ECHICHE NA ANKARA - KONYA - ANKARA Kwa K: 07.00 Polatli K: 08.52) Kkara K: 07.24-Konya V: 09.35 (Sincan-Polatli enweghị ọkwa.) Kkara K: 11.30-Konya V: 09.59 (Sincan K: 10.19 Polatli enweghị ọkwa.) Kkara K: 11.30- Konya V: 13.20 (Sincan K: 13.00: 14.52 Polatli post). Kedu K: 13.24-Konya V: 15.15 (Sincan-Polatli post.) Kkara K: 17.07-Konya V: 15 (Sincan K: 39 Polatli K: 17.15) Ankara K: 19.05-Konya V: 18.30 (Sincan K: 20.25 Polatli K: 18.54) HOURS KONYA: Konya K: 19.14-Ankara V: 20.45 (Polatli incan
Başiskele Battı Mmezi Lighting Light Light
IETT na-ezute ndị njem ma na-eweta Ngwọta
Lakes Express Na-amalite njem Mgbe Afọ gachara
Zụ njikọ site na Eskişehir na Afyon na Kütahya
Oge ụgbọ oloko dị elu
Usoro ọsọ ọsọ na-azụpụta oge
Akwụkwọ akụkọ Họrọ ọnwa October 2019 (467) September 2019 (555) August 2019 (508) July 2019 (633) June 2019 (504) Mee 2019 (526) April 2019 (418) March 2019 (521) February 2019 (483) January 2019 (502) Ogwe 2018 (620) November 2018 (504) October 2018 (435) September 2018 (517) August 2018 (486) July 2018 (506) June 2018 (581) Mee 2018 (467) April 2018 (545) March 2018 (554) February 2018 (500) January 2018 (557) Ogwe 2017 (509) November 2017 (427) October 2017 (538) September 2017 (455) August 2017 (505) July 2017 (479) June 2017 (477) Mee 2017 (493) April 2017 (434) March 2017 (540) February 2017 (477) January 2017 (538) Ogwe 2016 (487) November 2016 (631) October 2016 (657) September 2016 (542) August 2016 (608) July 2016 (485) June 2016 (661) Mee 2016 (664) April 2016 (700) March 2016 (804) February 2016 (855) January 2016 (751) Ogwe 2015 (799) November 2015 (640) October 2015 (624) September 2015 (428) August 2015 (493) July 2015 (505) June 2015 (535) Mee 2015 (577) April 2015 (622) March 2015 (1017) February 2015 (878) January 2015 (1077) Ogwe 2014 (963) November 2014 (826) October 2014 (771) September 2014 (598) August 2014 (808) July 2014 (911) June 2014 (735) Mee 2014 (957) April 2014 (972) March 2014 (864) February 2014 (720) January 2014 (733) Ogwe 2013 (664) November 2013 (656) October 2013 (548) September 2013 (570) August 2013 (533) July 2013 (661) June 2013 (577) Mee 2013 (734) April 2013 (1059) March 2013 (1102) February 2013 (811) January 2013 (906) Ogwe 2012 (911) November 2012 (1168) October 2012 (830) September 2012 (886) August 2012 (974) July 2012 (863) June 2012 (591) Mee 2012 (445) April 2012 (563) March 2012 (699) February 2012 (546) January 2012 (417) Ogwe 2011 (149) November 2011 (35) October 2011 (23) September 2011 (18) August 2011 (25) July 2011 (18) June 2011 (16) Mee 2011 (13) April 2011 (13) March 2011 (33) February 2011 (24) January 2011 (13) Ogwe 2010 (335) November 2010 (12) October 2010 (15) September 2010 (12) August 2010 (16) July 2010 (9) June 2010 (19) Mee 2010 (6) April 2010 (3) March 2010 (62) February 2010 (303) January 2010 (1838) Ogwe 2009 (4) November 2009 (1) October 2009 (3) September 2009 (3) August 2009 (2) June 2009 (3) Mee 2009 (2) April 2009 (3) March 2009 (9) February 2009 (4) January 2009 (3) November 2008 (1) October 2008 (1) September 2008 (2) August 2008 (1) July 2008 (2) June 2008 (2) Mee 2008 (2) April 2008 (1) March 2008 (3) February 2008 (5) January 2008 (2) Ogwe 2007 (2) October 2007 (2) July 2007 (1) Mee 2007 (1) April 2007 (1) February 2007 (2) January 2007 (1) Ogwe 2006 (1) October 2006 (3) August 2006 (1) June 2006 (2) Mee 2006 (2) April 2006 (2) March 2006 (2) November 2005 (2) August 2005 (1) June 2005 (1) March 2005 (2) February 2005 (1) January 2005 (1) Ogwe 2004 (1) October 2004 (3) July 2004 (1) Mee 2004 (2) Ogwe 2003 (1) October 2003 (1) Mee 2003 (1) March 2003 (1) February 2003 (1) January 2003 (1) Ogwe 2002 (1) October 2002 (4) August 2002 (1) April 2002 (1) March 2002 (2) January 2002 (2) July 2001 (1) June 2001 (1) March 2001 (1) Mee 2000 (3) March 1999 (1) October 1998 (2) March 1998 (1) August 1997 (1) October 1996 (1) August 1996 (2) Mee 1995 (1) August 1992 (1) Mee 1990 (1)
Oge izipu agba na ftlkü Park